11 Askari oo Khaliifa Xiftar Looga Dilay Weerar Ka Dhacay Bariga Wadanka Liibiya.
Saturday May 06, 2017 - 10:32:51 in Wararka by Super Admin
Tobaneeyo katirsan maleeshiyaadka Khaliifa Xiftar ayaa lagu dilay dagaallo iyo qaraxyo ka dhacay Magaalada banghazi ee Bariga wadanka Liibiya.
Khasaara lixaad leh ayaa maleeshiyaadka dagaal ooge Khaliifa Xiftar kasoo gaaray dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay bariga wadanka Liibiya.
Wararka ka imaanaya magaalada Banghazi ee xarunta gobolka Barqa ayaa sheegaya in dagaallo culus kadib khasaara lixaad leh dhabarka loo saariyay maleeshiyaadka dabadhilifyada ah iyo dagaal oogaha dhiigya cabka ah ee Khaliifa Xiftar.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan 11 askari oo saraakiil sar sare kamid yihiin lagu dilay dagaal culus oo xoogaga mujaahidiinta iyo kacdoonka cadawga kula galeen xaafadda Alsaabiriyi ee dhacda waqooyiga magaalada Banghazi.
Dagaallada ugu culus ayaa dhacay gelinkii dambe ee maalinadii shalay, wariyaal ayaa soo sheegay in dagaallada ay barbar socdeen qaraxyo lala eeganayay gaadiidka cadawga.
Saraakiisha laga dilay Khaliifa Xiftar waxaa kamid ahaa Nin hoggaamiye sare ah oo lagu magacaabi jiray Faraj Saasi.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in xoogaga golaha shuurada Thuwaarta Banghaazi ay fashiliyeen isku day cadawgu uu ku doonayay in uu kusoo galo xaafadda Alsaabiriyi sidoo kale kacdoon wadayaasha iyo Mujaahidiintu waxay maamulayaan mandiqadda Suuqul xuut ee isla Banghaazi.
Waa khasaarihii ugu xooganaa ee laba bilood gudahood cadawga kasoo gaara dagaalka culus ee ka socda bariga wadanka Liibiya.